Tsvaga Hunhu Hwako Martech Zone
Influencer kushambadzira inobatanidza mabrandi nezwi rine simba revagadziri vezvigadzirwa zvemadhijitari. Aya mabatidziro anomutsa kutaurirana kwechokwadi kutenderedza meseji meseji, achisimbisa kuvimbika kwemusiki uye kuita kwakateerana munzira dzezvemagariro, uchityaira kuziva nekuita.
Izvi zvinogadzira izwi-remuromo-rekuziva kune yako yakatarwa huwandu hwevanhu, zvakananga kuburikidza nemagariro enhau mavanoshandisa ivo nguva yavo yese. PaKuwana Kwako Kufurira, isu tinokubatsira iwe kuti uwane iwo akakodzera mazwi echako chako uye varege vatange kushanda kuparadzira meseji yako.
Wana Simba Rako
The Wana Simba Rako (FYI) inokurudzira kushambadzira chikuva chinotendera mabhenji kuti aone vanokurudzira, vatangisa mishandirapamwe, vateedzere mashandiro uye vape mhinduro. Iyo yese-in-one inopesvedzera yekushambadzira mhinduro iyo inogona kubatsira PR uye kushambadzira zvayakanakira kuita kuti vatengi vavo vataure neakanakisa vanokurudzira avo avo chaiwo marangi.
FYI yazvino puratifomu inosanganisira yakasimba kutsva kugona, kusanganisira zera, nzvimbo, kubatanidzwa, munharaunda kusvika, maindasitiri mapoka, jenda uye dzinza. Pamusoro pezvo, iyo FYI chikuva chinowedzeredza chinotendera mabrands kutsvaga vanokurudzira neakakosha mukati mezvirimo. Izvi zvinoreva kuti mabrand anogona kutsvaga kiyi kiyi inogona kuve yakanangana neayo marangi uye vanokurudzira mukati meiyo FYI network avo vakashandisa iwo mazwi akakosha, kana mazwi anoenderana, pasocial media chikuva, kana mukati meblog ravo.
Izvo zvinowedzeredzwa zvakaunzwa mune iyi vhezheni zvakaziviswa nemakore matanhatu e data, zvakasanganiswa nemushandisi mhinduro, uye zvinonyatso kumhanyisa maitiro ekutsvagisa. Mhando dzinoziva mhando dzevanokurudzira uye huwandu hwevateereri hwavanoda kunongedza uye isu takavandudza maitiro ekubvisa zvese zvinonetsa nekuvashandira zvakanyanya nekukurumidza.
Cristine Vieira, Mutungamiri uye mushandirapamwe weKutsvaga Yako Simba
Uye kana timu yako yekushambadzira yakabatikana zvakanyanya kana isina ruzivo rwekushanda nevanokurudzira, FYI ine basa rekuzvisarudzira rekushandisa timu yavo yevatengesi vekare kuti vakuitirei. Uye, zvawanikwa zvakavimbiswa.
Ronga a Tsvaga Yako Simba Remaonero
Nezve Tsvaga Yako Simba (FYI)
Yakatangwa mu2013, Tsvaga Hunhu Hwako ndiyo inotungamira SaaS-based influencer yekushambadzira mhinduro yakavakwa nevatengesi yevatengesi. Yakavimbwa nemazhinji emhando yepamusoro muUnited States, FYI inoshandisa tekinoroji yehunyanzvi yekutsvaga vanokurudzira, maneja emakampeni uye ekuteedzera metric. Munzvimbo inogara ichichinja yemusika yedhijitari, FYI inogadzirisa hukama nemabhureki uye inovamirikidza pamwe nevanokurudzira zvakanaka kuti vape mhedzisiro yakavimbiswa. FYI inotungamirwa muScottsdale, Arizona uye inotungamirwa nevakabatana-vavambi Jamie Reardon naCristine Vieira.
Tags: cristine vieiratsvaga vanokurudziratsvaga simba rakofyimaitiro ekuwana vanokurudzirainfluencer zerakukurudzira vateereri huwandu hwevanhukushambadzira kushambadzirajamie reardon
Celtra: Shandura iyo Ad Kubata Dhizaini Maitiro
Vhidhiyo Email: Inguva Yekutengesa Kuti Uve Wemunhu